မူလစာမျက်နှာ > စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်သည် DMM က ကမ်းလှမ်းသည့် ဝယ်သူ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် မိုဘိုင်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု (ဤမှနောက်တွင် “ဝန်ဆောင်မှု” ဟုရည်ညွှန်းမည်) ၏ အကျိုးပြုမှုများအပေါ် ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများ (ဤမှနောက်တွင် “ဝယ်သူ” ဟု ရည်ညွှန်းမည်) နှင့် ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေး မြန်မာ လီမီတက် (ဤမှနောက်တွင် “DMM”ဟုရည်ညွှန်းမည်) တို့အကြားချုပ်ဆိုသော သဘောတူညီချက်စာချုပ် ဖြစ်ပါသည်။
၁. စကားရပ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
သဘောတူညီချက် ဆိုသည်မှာ- အခါအားလျော်စွာ DMM က ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အခကြေးငွေဇယားနှင့်အတူ ဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို ဆိုလိုသည်။
CBM ဆိုသည်မှာ- ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ်ကို ဆိုလိုသည်။
ဝယ်သူ ဆိုသည်မှာ- ၀န်ဆောင်မှု၏ အကျိုးပြုမှုများကို ရယူရန် မှန်မှန်ကန်ကန် မှတ်ပုံတင်ပြီး ဤမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသူ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူအသုံးပြုသော လူတစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် တရားဥပဒေကြောင်းအရ သီးခြား ရပ်တည် နေသောသူကို ဆိုလိုသည်။
DMM ဆိုသည်မှာ- ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေး မြန်မာ လီမီတက်ကို ဆိုလိုသည်။
အခကြေးငွေ ဆိုသည်မှာ- DMM က ထုတ်ဝေသော အခကြေးငွေဇယားတွင် ပါရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျသင့်သော အခကြေးငွေနှင့် ကျသင့်ငွေ အားလုံးပါဝင်သည်။
အဆင့်-၁ ငွေစာရင်း ဆိုသည်မှာ- ဝယ်သူအား စိစစ်အတည်ပြုရန် မလိုသော ဝယ်သူ၏ ငွေစာရင်း ပုံစံ တစ်မျိုးကို ဆိုလိုသည်။
အဆင့်-၂ ငွေစာရင်း ဆိုသည်မှာ- ဝဝ်သူအား စိစစ် အတည်ပြုရန် လိုအပ်သော ဝယ်သူ၏ ငွေစာရင်းကို ဆိုလိုသည်။
မိုဘိုင်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ငွေစာရင်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု ငွေစာရင်း (MFS Account) ဆိုသည်မှာ- ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် DMMက ထောက်ပံ့ပေးမည့် စုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် တန်ဘိုးတစ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။
MSISDN ဆိုသည်မှာ- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်း စခန်း အသင်းဝင်များ၏ လမ်းညွှန်နံပတ် ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းသည် မိုဘိုင်း ကွန်ပျူတာကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ခြင်းတစ်ခုဖြင့် ဝယ်သူအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သိစေရန် အသုံးပြုသည့် တစ်ခုတည်းသော နံပတ်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ဆိုသည်မှာ- DMMနှင့် ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဝယ်သူက အသုံးပြုရမည့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
မှတ်ပုံမတင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု/ Over-The-Counter (OTC) မှတ်ပုံတင်မထားဘဲ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှု ဆိုသည်မှာ- DMM က ဝယ်သူ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ထောက်ပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုသည်။
PIN သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အထောက်အထားနံပတ် ဆိုသည်မှာ- ထိုဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသောအခါ ဝယ်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စစ်မှန်ကြောင်း သက်သေပြရန် အသုံးပြုသည့် စာဝှက် သင်္ကေတ ၄-လုံးကို ဆိုလိုသည်။
POS/အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ရောင်းချမည့်နေရာ/အေးဂျင့် ဆိုသည်မှာ- DMM ၏ ကိုယ်စား ဝယ်သူသို့ တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် DMMနှင့် အေဂျင်စီ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။
အခကြေးငွေဇယား ဆိုသည်မှာ- DMM, POS/အေးဂျင့်နှင့် ဖြန့်ချီသူများက လူအများသုံးစွဲနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝယ်သူက အသုံးပြုခြင်းအတွက် ပေးရမည့် အခကြေးငွေစာရင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ- မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုပြီး၊ အထူးသဖြင့် electronic terminals အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် အကြွေးလက်မှတ်များအပါအဝင် မိုဘိုင်းနည်းပညာ အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုများဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုသည်။SIM ဆိုသည်မှာ- အသင်းဝင်များ၏ အထောက်အထားဆိုင်ရာ သီးခြားယူနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ မိုဘိုင်းကွန်ယက်အပေါ် အသင်းဝင်တစ်ဦးက စစ်မှန်ကြောင််းသက်သေပြရန် အသုံးပြုသည့် သေးငယ်သည့် တုံကင်ပြား microchip စက်ကရိယာလေးကို ဆိုလိုသည်။လျို့ဝှက်သင်္ကေတ ဆိုသည်မှာ- လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဝယ်သူကရွေးချယ်ထားသော သီးသန့်နံပတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
လျို့ဝှက်သင်္ကေတသည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေ ပြရာတွင် အသုံးပြုသည့်အရာ ဖြစ်သည်။
ဆိပ်ကမ်းအပြင်သို့ (Port Out) ဆိုသည်မှာ မိုဘိုင်းကွန်ယက် တာဝန်ခံတစ်ဦးနှင့် အခြားမိုဘိုင်းကွန်ယက် တာဝန်ခံတစ်ဦးသို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများအား ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မိုဘိုင်းနံပတ်များ ထိန်းသိမ်းထားရန် ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
၂။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း
၂-၁။ ဝယ်သူ၏ သက်သေခံ အထောက်အထားနှင့် အရည်အချင်းများ
(က). အဆင့်-၁ ငွေစာရင်း- ဝယ်သူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားရန် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ မလိုဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် အဆင့်-၁ ငွေစာရင်းကို ဖွင့်နိုင်သည်။
(ခ). အဆင့်-၂ ငွေစာရင်း- ဝယ်သူသည် DMM and CBM က သတ်မှတ်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ရန်မှုများနှင့်အညီ မည်သည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားကို လုံလောက်သော သက်သေခံချက်ကို ကျေနပ်အောင် ပြသရန် DMM သို့ တင်ပြရမည်။
(ဂ). ကောင်တာမှ ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ – ဝယ်သူက DMM and CBM က သတ်မှတ်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ရန်မှုများ နှင့်အညီ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားကို လုံလောက်သောသက်သေခံချက်နှင့် ကျေနပ်အောင် ပြသ၍ ဝယ်သူ၏ MSISDNက ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကောင်တာမှ ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးချနိုင်ပါသည်။
(ဃ). ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံး သို့မဟုတ် တချို့တဝက်ကို ရရှိရန် အလို့ငှာ- ဝယ်သူသည် active အသုံးပြု၍ရသော တယ်လီနော မိုဘိုင်းဖုန်း SIM ကဒ် တစ်ခု ရှိရမည်။
၂.၂။ ဝယ်သူက မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
(က). မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ- ခွင့်ပြုထားသော POS / အေးဂျင့်လိုင်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ တစ်ဆင့် ဖြစ်ရမည်။
(ခ). ဝယ်သူက မှတ်ပုံတင်ထားသည့် MFS ငွေစာရင်းမှတဆင့် တောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများကို ရရှိရန် အလို့ငှာ မှတ်ပုံတင်သည့် အချိန်တွင် PIN နံပတ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမည်။
(ဂ). ဝယ်သူသည် တောင်းခံထားသော လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MFS ငွေစာရင်းတွင် လုံလောက်သော credit အကြွေးဝယ်ခွင့်ငွေရှိရမည်။
(ဃ). ဝယ်သူသည် လုံလောက်သော အကြွေးဝယ်ခွင့် SIM ကဒ် ကို ထိမ်းသိန်းထားရမည်။
၂-၃။ ဝယ်သူ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ
(က). ဝယ်သူသည် ၄င်း၏ PIN နံပတ်ကို လျို့ဝှက်ထားရန်နှင့် POS/အေးဂျင့် သို့မဟုတ် DMM ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမပြုရ။
(ခ). လျို့ဝှက်သင်္ကေတကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုသည့်အခါ ဝယ်သူသည် ၄င်း၏လျို့ဝှက်သင်္ကေတကို လျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရန် ရည်ရွယ်သူ တစ်ဦးတည်းထံ ထုတ်ဖော်ပြသရမည်။ ဝယ်သူသည် POS/ အေးဂျင့်များ အပါအဝင် ရည်ရွယ်ထားသော လက်ခံသူမှတပါး အခြားသူတစ်ဦးဦးထံ လျို့ဝှက်သင်္ကေတကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမပြုရ။
(ဂ) ဝယ်သူသည် အကယ်၍ ၄င်း၏ မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် SIM ကဒ် အား အခိုးခံရပါက SIM ကဒ်ပေါ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော MFS ငွေစာရင်းအား ပိတ်ပစ်ရန်အလို့ငှာ DMM သို့ ချက်ချင်းအသိပေးရမည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသော MFS ငွေစာရင်းသည် တစ်ဦးချင်း ဝင်ရောက်ရသော စက်ယန္တယားဖြစ်ပါသည်။ MFS ငွေစာရင်းအား ပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား ဆိုင်းငံ့ထားမည့်အပြင် ခွင့်ပြုချက်မရှိသော လုပ်ငန်းများအား ကာကွယ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ). အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဝယ်သူ၏ PIN နံပတ်အားရရှိပြီး၊ ဝယ်သူ၏SIMကဒ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော MFS ငွေစာရင်းအား ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါက ၄င်းကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်က MFS ငွေစာရင်းသို့ ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ဝယ်သူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်က ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
(င). ဝယ်သူသည် ဤသဘောတူညီချက်အရ ၄င်း၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်ကို DMM ၏ အတိအလင်း ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲ အခြားသူအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပေးအပ်ခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါ။
(စ). ဝယ်သူသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အပါအဝင် မည်သည့် အကြမ်းဖက်မှု၊ တရားမဝင်သော လိမ်လည်သော သို့မဟုတ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုရ။
(ဆ). ဝယ်သူသည် ၄င်း၏ MFS ငွေစာရင်းနှင့်အတူ သို့မဟုတ် MFS ငွေစာရင်းအား ရပ်စဲခြင်းမပြုဘဲ မိမိ၏ MFS ငွေစာရင်းတွင်ရှိသော ငွေများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ငွေလွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြွေးမီ ပေးဆပ်ခြင်း/ ရွေးနုတ်ခြင်း ပြုခွင့်ရှိသည်။
၂-၄။ MFS ငွေစာရင်း၏ အပြောင်းအလဲများ
(က). ဝယ်သူသည် MFS မိုဘိုင်းငွေစာရင်း ဖွင့်နေစဉ်အတွင်း (Port Out) လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ MFS မိုဘိုင်းငွေစာရင်း အခြေအနေအရ Port Out လုပ်ရန် တောင်းဆိုပါက အပိတ်ခံရနိုင်ဘွယ်ရှိပါသည်။
(ခ). MSISDN ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် MSISDN ရပ်စဲခြင်းအတွက် မည်သည့် တောင်းဆိုမှုများကိုမဆိိုု ခွင့်မပြုပါ။ အဆိုပါ MSISDN မိုဘိုင်းငွေစာရင်း အခြေအနေအရ မိုဘိုင်း MSISDNငွေစာရင်း ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် MSISDN ရပ်စဲခြင်းအတွက် တောင်းဆိုပါက အပိတ်ခံရနိုင်ဘွယ်ရှိပါသည်။
(ဂ). MSISDNအတွက် မည်သူမျှ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ MFS မိုဘိုင်းငွေစာရင်း အခြေအနေအရ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုပါက အပိတ်ခံရနိုင်ဘွယ် ရှိပါသည်။
(ဃ). မည်သည့် MSISDNအတွက်မဆို SIM ကဒ် အစားထိုးအသုံးပြုပါက ငွေစာရင်း၏ PIN နံပတ်ကို ပြောင်းလဲရမည်။ ဝယ်သူသည် Call Center သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၄င်း၏ ငွေစာရင်းကို အသုံးမပြုမီ ယင်းသို့ အသုံးပြုနိုင်ရန် PIN နံပတ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းပြုရန် တောင်းဆိုရမည်။
၂-၅။ တိုင်တန်းမှုများအား ယာယီ သိမ်းဆည်းထားခြင်း။
(က). ဝယ်သူသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ပေးထားသော DMM hotline ကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့်ရေးသားပြီး DMM ကို အသိပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားခြင်းများကို ယာယီ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ DMM က တိုင်တန်းမှုကို စုံစမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်ရက် (၅)ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းပေးရမည်။ အကယ်၍ တိုင်တန်းမှုကို (၅)ရက်အတွင်း မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ဝယ်သူအား အကြောင်းကြားပြီး၊ တစ်ဆက်တည်းနောက်ထပ် (၁၀)ရက်အတွင်း အတူတူ ဖြေရှင်းရမည်။
(ခ). တိုင်တန်းမှု တစ်ခု၏ ကိုးကား နံပတ်နှင့် အခြားဆက်နွယ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဝယ်သူသို့ တိုင်တန်းမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို ၄င်းကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်ရန် ပေးရမည်။
(ဂ). အကယ်၍ ဝယ်သူသည် တိုင်တန်းမှုအား ဖြေရှင်းပေးခြင်းကို မကျေနပ်ပါက ဝယ်သူသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန် DMM ၏ အကြီးတန်း ကိုယ်စားလှယ်များထံ တိုင်တန်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂-၆။ မိုဘိုင်း ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လိမ်လည်ခြင်း။
(က). အကယ်၍ ဝယ်သူသည် ၄င်း၏ MFS ငွေစာရင်းကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နှင့်/သို့မဟုတ် သံသယ ဖြစ်ဘွယ် ပတ်သက်သည့် လိမ်လည်မှု၏ သားကောင် ဖြစ်ရကြောင်း ယုံကြည်ရန်ဖြစ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းရှိပါက ဝယ်သူသည် ထိုကိစ္စကို အနီးဆုံး POS/ အေးဂျင့် မှတဆင့် DMM သို့ ချက်ချင်း အစီရင် ခံရမည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို နုတ်ဖြင့် DMM hotline သို့လည်းကောင်း စာဖြင့်ရေးသားထားသော အစီရင်ခံစာဖြင့် လည်းကောင်း ပေးပို့ရမည်။
(ခ). ဝယ်သူသည် စွပ်စွဲထားသည့် လိမ်လည်မှုအစီရင်ခံစာ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို DMM နှင့်အတူ သင့်လျော်သော အာဏာပိုင်များ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များအပေါ် DMM နှင့် အာဏာပိုင်များက ဝယ်သူဘက်မှ အမှား သို့မဟုတ် ပေါ့လျော့မှု မရှိဘဲ လိမ်လည်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ထို့ပြင် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် DMM က ပေးထားသော လုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံမှု အစီအမံများကို လိုက်နာခဲ့သော်လည်း လိမ်လည်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိပါက DMM သည် ထိုလိမ်လည်မှုကြောင့် ဝယ်သူခံစားရသည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်အမ်းပေးရန် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
(ဃ). ဝယ်သူသည် DMM သို့ လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် အားလုံးကို ပေးရမည်။ ယင်းသည် DMM က လိမ်လည်မှုများ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု သိုူ့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အား ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ လိုအပ်သည့် အချက်များ ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်နှင့် ဝယ်သူက သဘောတူရမည်မှာ DMM သည် ၄င်းနှင့် ဆက်စပ်သောကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်း ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သို့မဟုတ် အခြားနေရာတွင် အဆိုပါ ဥပဒေအရ လိုအပ်သော တရားရုံး တွင် ဝယ်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည်။
၂-၇။ DMM ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ။
(က). DMM သည် ဝယ်သူအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်နှင့် DMM ၏ ထိန်းချုပ်မှု ကို ကျော်လွန်၍ နည်းပညာ အခက်အခဲရှိသည့် အခါမှတပါး ယင်းဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်ပြည့် ရရှိနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးရမည်။
(ခ). DMM သည် အောက်ပါ အပိုဒ်-၄ တွင် ဖော်ပြထားချက်နှင့်အညီ MFS ငွေစာရင်းကို ဆိုင်းငံံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ဂ). DMM သည် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ငွေကြေးလုပ်ငန်းများနှင့် ငွေစာရင်းကို ချိန်ညှိ၍ ကန့်သတ်ချက်များ ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
(ဃ). DMM သည် အခါအားလျော်စွာ ကမ်းလှမ်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြောင်းလဲ ခြင်း ကို သင့်လျော်သော ကာလအတွင်း ဝယ်သူသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။ အကယ်၍ ဝယ်သူက ယင်းပြောင်းလဲသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောမတူပါက ယင်း အကြောင်းကြားခြင်း ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်စဲနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ဝယ်သူသည် ပြင်ဆင်ချက်များကို ပြုလုပ်ထားကြောင်း DMMက အကြောင်းကြားစာ လုံလုံလောက်လောက် ပေးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း(၃၀) အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက် အသုံးပြုနေပါက သို့မဟုတ် ဝယ်သူသည် ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်စဲရန် ယင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရက်(၃၀) အတွင်း DMM သို့ အသိပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက DMM သည် ပြင်ဆင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ဝယ်သူက ဖတ်ရှု သဘောတူ လိုက်နာမည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
(င). DMM က အဆိုပါ SMS တိကျမှုရှိကြောင်း သို့မဟုတ် SMS ရောက်ရှိကြောင်း အာမခံရန် မလိုဘဲ ဝယ်သူထံ အခါအားလျော်စွာ SMS သတင်းတို ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ DMM သည် ဝယ်သူကို ဆက်သွယ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော နံပတ်များ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းများကိုသာ အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်ရမည်။ DMM သည် အဆိုပါ SMS ကို ဝယ်သူက လက်ခံရန် ကြံ့ကြာမှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု မှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဝယ်သူခံစားရသည့် မည်သည့် ဆုံးရှုံးမှု စရိတ်စက တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် နစ်နာကြေးများကို မဆို DMM က တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
(စ).ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းလုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်း လက်တွေ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရာတွင် DMM က မည်သည့် ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံခြင်းကိုမျှ ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၂-၈။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ
(က) တောင်းဆိုမှုအပေါ် မူတည်၍ DMMက အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာဖြင့် အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ (hard copy formats) ကို နောက်ဆုံး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း ဝယ်သူ၏ MFS ငွေစာရင်းမှ ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းများကို ဝယ်သူသို့ ပေးရမည်။ ဝယ်သူသည် DMM hotline သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ယင်းမှတ်တမ်းကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ DMM သည် ထိုမှတ်တမ်း၏ ပြဌာန်းချက်များအတွက် အခကြေးငွေ တောင်းခံခွင့် ရှိသည်။
၃။ ဝန်ဆောင်ခများနှင့် အခြား စရိတ်များ။
၃-၁။ DMMသည် POS/ အေးဂျင့် တည်နေရာနှင့် DMM website တွင် လူသိရှင်ကြား ရရှိနိုင်သော အခကြေးငွေ ဇယားနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ကောက်ခံရမည်။
၃-၂။ DMM သည် အခါအားလျော်စွာ အခကြေးငွေကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။
၃-၃။ ဝယ်သူ၏ ငွေစာရင်းအတွက် အခြားသော Network Service Provider ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် ကွန်ယက်များမှ ကောက်ခံသော မည်သည့် နောက်ထပ်ငွေကြေးကိုမဆို ကောက်ခံနိုင်သည်။
၄-၁။ DMM သည် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်ပါက ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့် ဝယ်သူက အသုံးပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အချိန်မဆို ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
(က).ဝယ်သူသည် ဤစာချုပ်အရ ၄င်း၏အာမခံမှုများအပါအဝင် ဤစာချုပ်၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များကို ချိုးဖောက်လျှင်
(ခ). ဝယ်သူ၏ MFS ငွေစာရင်းသည် ၃နှစ် ကာလတိုင် ကိန်းသေဖြစ်နေလျှင်
(ဂ). ဝယ်သူ၏ MFS ငွေစာရင်းသည် ဤစာချုပ်၏ အပိုဒ် ၂-၆ အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရလျှင်။
၄-၂။ အပိုဒ်၄-၁ အရ အဆိုပါ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းပြုပါက DMM သည် SMSဖြင့်/ စာဖြင့်ရေးသားပြီး သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ဝယ်သူသို့ နို့တစ် ပေးရမည်။ အပိုဒ် ၂-၆ အရ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့် စာချုပ်ရပ်စဲပါက DMM သည် ဤသဘောတူစာချုပ်အား ရပ်စဲခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းကို ရပ်စဲခြင်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အရ ရရှိနိုင်သော အခြားအခွင့်အရေးနှင့် ကုစားခွင့်များကို ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသည်။
(က). ဝယ်သူသည် ဤစာချုပ်အရ ၄င်း၏အာမခံမှုများအပါအဝင် ဤစာချုပ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်လျှင်
၄-၃။ ဝယ်သူသည် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို POS / အေးဂျင့် မှတဆင့် စာဖြင့်ရေးသားသော နို့တစ်စာပေးပို့ပြီး သို့မဟုတ် DMM hotline ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး၊ DMM က ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။
၄-၄။ ဤသဘောတူ စာချုပ်အား ရပ်စဲပြီးနောက် ဝယ်သူက ပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေအားလုံးနှင့် ယင်း၏ တာဝန်များကို ဆက်လက်ပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေမည်။ DMM သည် ၄င်းနှင့်အတူ ဝယ်သူများက မပေးချေရသေးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခများနှင့် ဝယ်သူကိုင်ဆောင်ထားသော အခြား ငွေစာရင်းများမှ အခကြေးငွေများကို ခုနှိမ်ခွင့်ရှိသည်။
၅။ ငွေစာရင်းကို ပြန်အမ်းခြင်း
၅-၁။ ဝယ်သူ၏ MFS ငွေစာရင်းသည် ရပ်စဲခံရပါက သို့မဟုတ် အပိုဒ်၄-၁ နှင့်အညီ ဆိုင်းငံ့ခံရပါက ဝယ်သူသည် စာဖြင့်ရေးသား ဆက်သွယ်၍ အဆိုပါ ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရကြောင်းနှင့် ယင်း၏ MFS ငွေစာရင်းကို ပြန်အမ်းပေးပါရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
၅-၂။ အပိုဒ် ၆-၁ တွင် ရည်ညွှန်းထားသော MFS ငွေစာရင်း ပြန်အမ်းခြင်းကို တောင်းဆိုလာသောအခါ DMM က ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ အမှုတစ်ခုချင်းစီ ကို ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အပိုဒ်-၄အရ ရပ်စဲရန် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်မတည်ရှိတော့ပါ။
၆။ ဝယ်သူ၏ တာဝန်များ
၆-၁။ ဝယ်သူသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ PIN နံပတ် သို့မဟုတ် လျို့ဝှက်သင်္ကေတကို အသုံးပြုပြီး၊ ဝယ်သူ၏ MFS ငွေစာရင်းမှ နုတ်ယူခဲ့လျှင် အဆိုပါ ခွင့်ပြုချက်မရှိသောငွေသွင်းငွေထုတ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ DMM ၏အမှား သို့မဟုတ် ကြီးမားသောပေါ့ဆမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ခဲ့လျှင် ဝယ်သူသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိသောငွေသွင်းငွေထုတ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက် တာဝန်ရှိသည်။
၆-၂။ ဝယ်သူသည် ၄င်းကိုယ်ပိုင် စွန့်စားမှုဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် သဘောတူရမည် ဖြစ်ပြီး DMM ၏အမှား သို့မဟုတ် ကြီးမားသောပေါ့ဆမှုကြောင့် အဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်လျှင် DMM က အဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှုအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
၆-၃။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူသော ထုတ်ကုန်များ (သို့ရာတွင် ယင်းတို့ကို အခြားသူက သက်ဆိုင်ရာ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ယင်း၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပြီး ) ထို စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် ဝယ်သူနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကွန်ယက်ကြား တည်ရှိသော သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အစားမထိုးနိုင်ပါ။
ဝယ်သူသည် ၄င်း၏ MSF ငွေစာရင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံသူအား မှတ်ပုံတင်ရန် လာသောအခါ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ညွှန်ကြားချက်ပေးရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ DMM သည် ဝယ်သူက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေရာတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံသူအား မှားယွင်းပြုလုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှုအတွက် တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
DMM သည် ငွေပေးချေခြင်းကို လက်ခံသူများ၏ သက်သေခံကတ်ပြား/ အထောက်အထားကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။ DMM သည် ဝယ်သူများက ပြုလုပ်သော မမှန်ကန်သော ငွေပေးချေမှုများကို နောက်ပြန်ဆုတ်၍ မရနိုင်ပါ။
DMM သည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်ရာတွင် ဝယ်သူက ပြုလုပ်သည့် ငွေပေးချေမှုများအတွက် တိကျသော ညွှန်ကြားချက်များ ပေးရန် အတွက်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။
ငွေလက်ခံသူကို ပေးသော ငွေပေးချေမှုများကို အတည်ပြုသည့် နို့တစ်စာသည် ငွေလက်ခံသူက ထိုငွေကို လက်ခံရရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများကို ဝင်ရောက် ချဉ်းကပ်ခွင့် ရှိကြောင်း အကြောင်းခိုင်လုံစေခြင်း မရှိပါ။
DMM သည် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။ ထို့ပြင် ဝယ်သူသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာမှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် DMM က ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီးမေလ်း ၊ SMS သို့မဟုတ် အခြား အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် သတင်းပေးပို့ခြင်း ပြုရာတွင် ကြံ့ကြာခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝယ်သူ သို့မဟုတ် အခြားသူ ခံစားရသော မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ ဥပဒေအရ တောင်းခံမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု ကိုမျှ DMM က လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်မယူပါ။
DMM က ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့သော သတင်းအချက်အလက်၏ တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ သဘောသက်ရောက်သည် ဖြစ်စေ မည်သည့် ကိုယ်စားပြုမှု သို့မဟုတ် အာမခံမှုကိုမျှ မပြုလုပ်ပါ။
၆-၅။ ဝယ်သူသည် စားသုံးသူတစ်ဦးကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ၄င်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော အဆိုပါ အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်ရှိစေရမည်။
၇။ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့် တည်ရှိမှု
DMM သည် ဝယ်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရာတွင်-
၇-၁။ ဝယ်သူက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများ၊ ပေးပို့သော အီးမေလ်းများ၊ စာသားသတင်းအချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအပါအဝင် ဝယ်သူ၏ ငွေစာရင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဝယ်သူ၏လုပ်ငန်းများကို ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မိမိတို့၏ ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊
၇-၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးကွန်ယက်၏အရည်အသွေးကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ IT နည်းပညာစနစ်ကို ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းခြင်း
၇-၃။ ဝယ်သူ ပေးပို့ လက်ခံသည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများ၊ သတင်းပို့ခြင်းများ အပါအဝင် သို့သော် အကန့်အသတ်မရှိ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း ထိုဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ချိန်တွင် ဝယ်သူတည်ရှိသောနေရာ၊ အလားတူ ဝယ်သူ၏ (browsing history) ဝင်ရောက်အသုံးပြုခဲ့သော ကွန်ယက် လိပ်စာများ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုမှုများအား စိစစ်ခြင်း၊
၇-၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက ရဲနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များကို သတင်းအချက် အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊
၇-၅။ DMM ၏ မိခင် ကုမ္ပဏီနှင့် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၏ အတွင်း စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး အတွက် သို့မဟုတ် ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်သူများသို့ သတင်းအချက် အလက်များ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း။
၇-၆။ ဝယ်သူက မကန့်ကွက်လျှင် ဈေးကွက် သတင်းများနှင့်အတူ ဝယ်သူအား ဆက်သွယ်ခြင်း။ ဤသတင်းများတွင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ဈေးကွက်သတင်းများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်သူ၏ သတင်းများကို တာဝန်ယူလွွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဝယ်သူသည် DMM ထံမှ ဈေးကွက်သတင်းကို လက်မခံလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ယက် သို့မဟုတ် နံပတ် -၉၀၀ သို့မဟုတ် ၀၉၇၉၀၀၀၉၀၀၀ သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဝယ်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပုံကို ပိုမို အသေးစိတ် သိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကွန်ယက်ပေါ်တွင် privacy မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။
၈-၁။ DMMသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဤသဘောတူစာချုပ်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း လွှဲအပ်ခြင်း ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈-၂။ ဤနေရာတွင် ပါရှိသော အခွင့်အာဏာများ အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးရာတွင် စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်ဖက်၏ ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် ဤနေရာတွင် ပါရှိသော မည်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း သဘောတူညီချက်ကိုမဆို စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်ဖက်က မသိရှိခြင်း သို့မဟုတ် သဘောမတူညီခြင်းသည် ထိုနေရာ၏ ဖော်ပြချက်ကို စွန့်လွှတ်သည် သို့မဟုတ် အဆိုပါ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အာဏာကို တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျင့်သုံးခြင်းသည် ဤနေရာတွင် ပါရှိသော အခြားအခွင့်အရေးနှင့် အာဏာများကို ကျင့်သုံးခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။
၈-၃။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေများအရ ဆုံးဖြတ်ရမည်။
-ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး မြန်မာ
Hotline – 900 သို့မဟုတ် 9790009000